Fasaxii Sanadka Waa Dhamaaday Abhishek Bachchan Iyo Qoyskiisa Oo Xaafadoda Kusoo Noqdeen (+Sawiro) – Filimside.net
Fasaxii Sanadka Waa Dhamaaday Abhishek Bachchan Iyo Qoyskiisa Oo Xaafadoda Kusoo Noqdeen (+Sawiro)
January 6, 2019 Ali Aadan
Jilaaga caanka ah Abhishek Bachchan iyo qoyskiisa ayaa mudo ku maqnaayen dibada si ay ugu soo dalxiisan maadama ay ku guda jireen damaashaadka sanadka cusub waxaana la jireen xaaskisa Aishwarya Rai iyo gabadhiisa Aaradhya Bachchan.
Kadib damaashaad dheer caawa fiidkan xiliga hindiya ayee Mumbai dib ugu soo noqdeen waxaana laga soo qabtay sawiro ayagoo soo galayaan Mumbai kuna wajahan dhankaa iyo gurigooda.
Inta badan jilayaasha Bollywoodka ayaa fasaxa cusub New York kusoo qaateen waa magaalo la isla arkay oo ku haboon dalxiiska sidaa aawged lamaanahan iyo gabadhooda mudo 5 maalmod ayee halkaas ku maqnaayen.
Dhanka shaqada waxay goordhow duubis ku bilaawi doonan filmkooda ay hogaamiyasha kawada yihiin kaaso magac ahaan loo bixiyay Gulab Jamun 2010 ayaa isugu dambeesay inee film wada sameyaan balse sanadkaan ayaa lawada sugaa xidigahan.
Fadlan halkaan hoose ka daawo sawirada laga soo qabtay Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan iyo gabadhooda Aaradhya Bachchan xili ay kasoo daganayeen Airport-ga Mumbai caawa fiidkan..
Sido kale nala daawo intii ay New York kusugnaayen sawiradii ay baraha bulshada soo dhigayeen kuna muujinayeen inee dalxiis kuwada jiraan halkaan hoose ka daawo..
Check out a few pictures from their vacation